merolagani - दराजमा नोभेम्बर ११ मा ८० प्रतिशतसम्म छुट, किनमेल उत्सवमा अरु के हुन्छ ?
दराजमा नोभेम्बर ११ मा ८० प्रतिशतसम्म छुट, किनमेल उत्सवमा अरु के हुन्छ ?
ईकमर्श साइट दराजले नोभेम्बर ११ अर्थात कार्तिक २५ गते नेपालको पहिलो अनलाइन किनमेल उत्सव मनाउने भएको छ । अलिबाबामा विलय भए पछि नेपालमा दराज ११.११ सेल मेला पहिलो पटक आयोजना गरिएको हो ।
बृहत्तर ई–कमर्श संचालक अलिबाबाले १० वर्षअघि मनाउन शुरु गरेको सेललाई नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
विश्वमा भने अलिबाबाले सञ्चालन गर्ने यो सेल मेला सर्वाधिक ठुलो बनिसकेको छ । नेपालमा पनि अनलाइन किनमेलको लागी नयाँ किसिमको तयारी गरिएको दराजले जनाएको छ । छ ।
दराज ११.११ सेल नोभेम्बर ११ अर्थात कार्तिक २५ गतेको मध्यरातबाट शुरु भई ठिक २४ घण्टासम्म चल्नेछ । यो बिक्री उत्सवमा ८० प्रतिशतसम्मको छुट प्रदान गरिनेछ ।
यो अवधिमा खास नयाँ सामानहरुको लन्च, फ्ल्यास सेल्स, मिस्ट्री बक्स्, ब्राण्ड भौचरहरु र अन्य उपहारहरु दिनभरी नै चल्नेछ । १ हजार बढीको संख्यामा स्थानीय बिक्रेताहरुको साथमा यसभन्दा अघि कहिल्यै नपाइएको डिलहरुको विविधिकरणमा नेपालको पहुँच हुनेछ ।
११.११ नयाँ दराज एपको पहिलो मेगा सेल कार्यक्रम हो, यसले प्रयोगकर्ताहरुलाई उत्कृष्ट उत्पादनहरु र डिलहरु प्रदर्शन गरेर व्यक्तिगत रुपमा अनौठो अनुभव दिलाउने दराजको विश्वास छ ।
‘हामी हाम्रा ग्राहकहरुलाई यस्तो चिज दिंदैछौं जुन वहाँहरुले यसभन्दा अघि पहिले कहिल्यै पाउनु भएको थिएन । ११.११ अभियानको साथमा दराजले नेपालको किनमेललाई एक क्रान्तिकारी छवि प्रदान गर्नेछ । कहिल्यै नभएको छुट, कहिल्यै नपाइएको उत्पादन रोजाई, जहाँ नेपालीले लाखौं रुपैयाँ बराबरको पुरस्कारहरु जित्न सक्नेछन्,’ दराज नेपालका प्रबन्ध निर्देशक राजीव अमात्यले प्रष्ट पार्दै भने ।
दराजको ११.११ मा ककसले कति छुट दिन्छन् ?
दराज ११.११ सेलले औद्योगीक क्षेत्रका सर्वश्रेष्ठ ब्राण्डहरुलाई एकै ठाऊँमा ल्याएको छ । एमआई, वानप्लस, टाइटन, गोल्डस्टार, एडिडास, नाइक, पाल्सोनिक अष्ट्रेलिया, म्यानह्याटन, रीबक, मन्त्र गिटार्स, होम ग्लोरी, जे फिसर, रङ्गोली, सामसुङ्ग, एन्कर, सोनम गीयर्स र होलिडे प्याकेजहरुले आकर्षक डिलहरुका साथ थप छुट भौचरहरु प्रदान गर्नेछन् ।
हरेक समूह (फोन, फेसन, सौन्दर्य, होम एण्ड लिभिङ, ग्रोसरी, उपकरणहरु, कम्प्युटरहरु, टिभीहरु र अरु पनि धेरै) उत्पादनका विविधिकरणहरु अत्याधिक मूल्य कटौतीका साथ देख्न र किन्न सकिन्छ ।
स्मार्टफोन भएका सेवाग्राहीले दराज एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सेलमा एपबाट हुने कारोबारमा मात्र छुट पाइने दराजले जनाएको छ । एपलाई आफ्नो शपिंग कार्टमा जोडेर नोभेम्बर ११ अर्थात कार्तिक २५ का दिन धमाधम चेक आउट गर्न सक्ने बताइएको छ ।
ग्राहकहरुले आफ्नो रोजाईको ब्राण्डहरुको तर्फबाट डिलहरु र भौचरहरु उपलब्ध भएको देख्न सक्नेछन् भने पछिल्लो डिलहरुको बारेमा जानकार भैरहन औपचारिक स्टोरहरु फलो गनुपर्नेछ ।
११.११ सेलमा फ्ल्यास सेल्स, मिस्ट्री बक्स्, अन्य डिलहरु र भौचरहरु प्रत्येक घण्टामा प्रस्तुत भैरहने छन् । ग्राहकले जति धेरै ११.११ मा दराज एप अवलोकन गर्दछ, त्यति नै उत्कृष्ट अनुभव हासिल गर्ने कम्पनीको भनाई छ ।
दराजको “ब्राण्ड डे” मा छुट
दराजको पहिलो सेलर समिट नेपालमा, बजार बिस्तारका लागि नयाँ उद्घोष
दराज डटकम डटएनपीमा ७० प्रतिशतसम्मको छुट, शुक्रबारदेखि व्लाक फ्राइडे सेल
केमु बन्यो दराज, चार दिने अनलाइन कार्निभलमा दोहोरो छुट